Ị BỤ OTU NA ỤKỌ-CHUKWU KRỊSTI
Nkea bụ otu na ime uzọ Asaa bụ eziokwu ihe kpatara, ụmụ-nwanyi ga eji sonye na ịgba-odibọ ka Ụkọ-Chukwu
Na oge agbọ-ochie, ọnọdu ụmụ-nwanyi n’ihe gbasara Chineke di ntakịrị. Maka ihi na ebighị ụmụ-nwanyi ugwu, ha esoghị na ọnụ-ọgụ nke Ọgbugba-ndụ. Ha enweghị ikike ịweta aja. Mgbe niile ha nọgidere n’okpuru ụmụ-Nwoke, ọkachasi na ihe gbasara ihe Chineke
Jesu Kristi agbanwego ihe niile.
Nwanyi ọbụna mere Miri Chukwu a bụrụgo Kristi ọzọ, dika otu nwoke sịrị bụrụ.
“Ndi niile emere Miri Chukwu n’ime Kristi, e yịrịgo Kristi ka-uwe. Enwerọzikwọ nkewa na etiti ndi Jụụ na onye abụghị Jụụ, Ohu na Diala, Oke na Nwunye” (Galatians Atọ, Ịrị-abụọ n’asatọ)Nwanyi ọbụna mere Miri Chukwu e ketago oke n’uju na abụmụ Ụkọ-Chukwu Krịsti, Ndị nọna Ọkwa Eze na ndị Amụma
Miri Chukwu bụ ntọ ala nke nyere onye ọbụna ohere na sacramenti ndị ọzọga, tinyere ịgba-odibọ ka Ụkọ-Chukwu nchụ-Aja